သင်မပြီးဆုံးမီ AUSTIN တွင်လုပ်ရမည့်အရာများ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် - နှုန်းထားများ
သင်မပြီးဆုံးမီ Austin တွင်လုပ်ရမည့်အရာများ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဒီဟာက Austin မသင်ခင်မင်းလုပ်ရမယ့်အရာတွေပါ။
အဆိုပါ Littlefield ရေပန်း၌ခုန်
UT Tower နှင့်ပါလီမန်အဆောက်အအုံအဆောက်အအုံကြားတွင် Littlefield Fountain တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းဝင်း၏လှပပြီးပါ ၀ င်သည့်ထပ်ဆောင်းပစ္စည်းတစ်ခုပေးရုံသာမကကြီးမားသောအရာ၏နိဂုံးကိုပုံဖော်ရန်အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူရန်အလွန်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
သင်ကဘောလုံးပရိသတ်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတိုင်းကအနည်းဆုံး UT ဘောလုံးပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်ရမယ်။ ဘောလုံးသည်တက္ကဆက်ယဉ်ကျေးမှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ DKR အားကစားကွင်းကိုစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အချိန်တွင်တွေ့ကြုံရခြင်းသည်အခြားရပ်ရွာလူထုနှင့်မတူပါ။
All-nighter တစ်ခုကို PCL တွင်ဆွဲပါ
PCL မှာ All-nighter အနည်းဆုံးတစ်ခုကိုမဆွဲခဲ့ဘူးဆိုရင် UT ကိုတောင်သွားခဲ့တာလား။ Perry Castaneda စာကြည့်တိုက်သည် ၂၁ ရက်နေ့တွင်တည်ရှိပြီး Speedway သည်ကျောင်းဝင်းအတွင်းရှိအကြီးဆုံးစာကြည့်တိုက်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောတိတ်ဆိတ်သည့်နေရာများနှင့်အတူမရေမတွက်နိုင်သောခုံများနှင့်အလုပ်နေရာများနှင့်အတူ၎င်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
၆ လမ်းမမိတ်ဆက်၊ ရှင်းပြစရာမလိုသော်လည်း၎င်းသည်သင်၏ UT အတွေ့အကြုံတွင်အနည်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ အချို့သောသူများကတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပင် ၆ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအမှန်တကယ်နားလည်ရန်လုံလောက်မှုမရှိဟုဆင်ခြေပေးလိမ့်မည်။
မင်းအထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားအားကစားသမားဘယ်မှာလဲ။ သင်ကောလိပ်တက်သောကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ချစ်သောအားကစားကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည်။ သို့မဟုတ်သင်သာခင်မင်ရင်းနှီးယှဉ်ပြိုင်မှု၏အလုအယက်ကိုချစ်သလား UT သည်သင်ပါဝင်နိုင်သည့်ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားဆိုင်ရာလိဂ်များစွာကိုပေးထားသည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအားကစားသည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူမျှော်လင့်ရန်တစ်ခုခုရှိခြင်းနှင့်သင်အားခွင့်မပြုနိုင်သောအားကစားတစ်ခုကိုကြိုးစားလုပ်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည် မတိုင်မီ။
နေ့လည်ခင်းကို Graffiti ပန်းခြံတွင်သုံးပါ
Baylor လမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး Lamar ကိုချွတ်ပြီး Castle Hill ရှိ Austin ၏နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Graffiti ပန်းခြံတွင်နေထိုင်သည်။ မင်းမေးကြည့်ချင်သောရေးခြစ်ပန်းခြံကဘာလဲ? မည်သူမဆိုမှအနုပညာစွမ်းရည်ကိုပြသရန်ပြသရန်သီးသန့်ထားရှိသည့်ပန်းခြံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေးခြစ်အနုပညာရှင်များထံမှပက်ဖြန်းဆေးသုတ်ပုလင်းကိုတွေ့သောအပျော်တမ်းသမားများအထိပန်းခြံသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြောင်းလဲပြီးတစ်သက်တာ၏ဓာတ်ပုံအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။
အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်သွားစရာမလိုဘဲတက္ကဆက်ပြည်နယ်ကောလိပ်တွင် ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံရှိကြောင်းသင်ရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်သလား။ ၎င်းမှအဖြေမှာကြီးမားသောအဆီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မလုပ်နိုင်ပါ။ စစ်မှန်သောနှစ်ခြေလှမ်းအတွေ့အကြုံရှိရန်မြို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်နေရာများစွာရှိသည်။ သင့်ရဲ့ကောင်းဘွိုင်ဘွတ်ဖိနပ်ကိုချွတ်ပြီးကုန်းပေါ်သို့တက်ပါ။
South Congress တွင်ဈေးဝယ်။ စားပါ
သငျသညျ Austin ၏စရိုက်ကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ရန်ရှာဖွေနေပါကတောင်ကွန်ဂရက်ထက်မပိုပါစေနှင့်။ စားသောက်ကုန်ထရပ်ကားအမြောက်အများနှင့်အပေါက်များနံရံကပ်ဖက်ရှင်ဆိုင်များနှင့်အတူတောင်ကွန်ဂရက်သည်စိန်နှင့်ဝှက်ထားသော Uncommon Objects နှင့် Lucy ကဲ့သို့သောအံ့ဖွယ်ဆိုင်များရှိသည်။
တောင်အာဖရိကတွင် Austin Pets Alive အတွက်အသင့်တော်ဆုံးခန်းမရှိသည့်ကလေးငယ်များနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းနိုင်သည်။ Jo's Café၏နံဘေးတွင် I Love You So အများကြီးပန်းချီကားများကဲ့သို့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဓာတ်ပုံအခွင့်အလမ်းများလည်းရှိသည်။
နေ့လည်ခင်း Zilker ပန်းခြံတွင်သုံးပါ
မြို့လယ်အလယ်၌ပွင့်လင်းသောလယ်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ရခဲသည်။ သို့သော် Austin သည်စည်းမျဉ်းများကိုခြွင်းချက်ထားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ACL နှင့် Kite ပွဲတော်ရှိ Zilker သည်ustက ၃၅၀ ကျော်ရှိပြီး Austinites များသည်အပန်းဖြေအနားယူရန်၊ အပန်းဖြေရန်အားကစားများပြုလုပ်ရန်၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အခြားအရာများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ နေ့ခင်းကိုမြက်ခင်းပေါ်တွင် သုံး၍ အပန်းဖြေအနားယူပါ။
သင့်အနေဖြင့် ၂၁ နှစ်သာရှိသေးပြီးညစ်ပတ်ခြောက်အဆင့်နှင့်တူညီသောဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာလျှင် Rainey Street ကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။ ဟောင်းနွမ်းနေသောအိမ်ဟောင်းအရက်ဆိုင်များနှင့်ပြည့်နေသည့် Rainey သည်ပုံမှန်သောက်စရာသို့မဟုတ်အချိုရည်များစွာသောက်ရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Rainey ရှိ Bangers ကဲ့သို့သောနေရာများသည်နေသာသောနေ့လည်ခင်းတွင်နေ့လည်စာစားသုံးရန်အဓိကနေရာဖြစ်သည်။
Austin City Limits သို့သွားပါ
တနင်္ဂနွေနှစ်ရက်တွင်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ Austin City Limits သည်မြို့ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်မမေ့နိုင်သောအချိန်များဖြင့်ဂုဏ်တင်ပါလိမ့်မည်။ အောင်မြင်မှုရရှိရန်ရည်မှန်းထားသော Indie အဆိုတော်များအားယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးအနုပညာရှင်များ၏တနင်္ဂနွေနေ့များအတွက်လက်မှတ်များသည်ဒေါ်လာ ၂၅၀ မှစတင်သည်။ ACL မှပေးသောဂီတ၊ အစားအစာနှင့် Vibes များကိုပျော်မွေ့ရန် Zilker ၌သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်တနင်္ဂနွေကိုတနင်္ဂနွေပေးပါ။
2am မှာ Roppolo ရဲ့စားပါ
6 လမ်းပေါ်မှာကမှအံ့သြဖွယ်ရှုထောင့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့် Roppolo ရဲ့ပီဇာကဲ့သို့အရသာအဘယ်သူအားမျှ။ $4တစ်အချပ်အနေဖြင့်, Roppolo ရဲ့အရက်ဆိုင်အရသာတစ်ခုဌန်ရှိပါတယ်ရုံဘားမှာညဥ့်ပြီးနောက်ကိုလောင်သောအခါပိုပြီးအရသာဖြစ်ဖြစ်ပျက်။
Downtown မှ pedicab အိမ်ကိုယူပါ
သူတို့ကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်က pedicab မှာမောင်းနှင်တာနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုစမ်းကြည့်ဖူးလား။ စင်ဒရဲလားကိုသင်၏ဖရုံသီးတင်ဆောင်လာသည့်နေရာတွင်လှည်းကပ်နေသည်ဟုခံစားရသည့်အချိန်တွင်ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ကိုင်သည့်စက်ဘီးစီးသူများအားသင်၏စီးပွားရေးကိုပေးပါ - ၎င်းသည်ဘားတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့ယူရန်သာဖြစ်လျှင်ပင်။
Lady Bird Lake တွင်လှေပေါ်တက်ပါ
အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်လှော်ဘုတ်ပေါ်၌ရွက်လွှင့်မထားခဲ့ပါလျှင် Austin တွင်အမြဲတမ်းနီးပါးပြီးပြည့်စုံသောရာသီဥတုနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏မြို့အား disservice လုပ်လိမ့်မည်။ $ 15-30 ကနေသင့်ရဲ့လက်ကျန်ငွေကိုစမ်းသပ်ပြီးစမ်းကြည့်ဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။ သင် ထပ်မံ၍ တက်လှမ်းချင်လျှင် Lady Bird ရေကန်တွင်ကမ်းလှမ်းထားသောလှော်ခတ်ထားသောယောဂကိုစမ်းကြည့်ပါ။
သွေးစုပ်သောသတ္တဝါများသည် Edward Cullen သို့မဟုတ် Salvatore Brothers ကိုသာသင့်အားသတိရစေနိုင်သော်လည်း Austin သည်လင်းနို့များကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်ကြီးမားသောထောက်ခံသူဖြစ်သည်။ နွေရာသီညတိုင်းလူသန်းပေါင်းများစွာသည်လင်းနို့များလင်းနို့ပျံသန်းလာသည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်ကွန်ဂရက်ရိပ်သာလမ်းတံတားပတ်လည်တွင်စုရုံးကြသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Austin မြို့သည် SXSW ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတစ်ပတ်လုံးလုံးလုံးဝပိတ်ပစ်သည်။ UT ကျောင်းသား၏နွေရာသီအနားယူချိန်တွင် South-By သည်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူရုပ်ရှင်၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောမီဒီယာနှင့်ဂီတပွဲတော်များကိုဖျော်ဖြေသည်။ South-By မှပြုလုပ်သောပွဲများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ Pass တစ်ခုဝယ်ယူခြင်းသည်နာမည်ကြီးလူကြိုက်များသည့်သီးသန့်ဖြစ်ရပ်များကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
သင်တစ် ဦး dildo အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်
အစားအစာထရပ်ကားတစ်စီးထဲမပြေးဘဲ Austin ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသွားရန်ခက်ခဲသည်။ Barbecue မှ Ice Cream သို့ Donuts အထိ Frozen Bananas အထိပီဇာအထိဖြစ်သည်။ အစားအစာရွေးချယ်မှုသည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်။
Austin ၏အကျော်ကြားဆုံးနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သော ABC Kite Festival သည်မတ်လ၏ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်သည်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့စွန်တွေကိုသယ်ဆောင်ပြီး Zilker Park မှာမြင့်မားစွာပျံသန်းနိုင်တဲ့အခမဲ့ပွဲတစ်ခုပါ။ စွန်လည်းမရှိဘူးလား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး! လူတော်တော်များများပွဲတော်ကိုသွားပြီးကြည့်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။
အဆိုပါတိုးမြှင့်လှေကားတစ် ဦး လေယာဉ်တက်လမ်းလျှောက်ပါဝင်သည်ပေမယ့်မြင်ကွင်းကိုအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်နေ ၀ င်နေချိန်တွင် Bonnell တောင်သို့သွားနိုင်သည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။ သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် (သို့) ပျော်ပွဲစားခြင်းတောင်းကိုယူလာပြီးသင်ကိုယ်တိုင်သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပါ။
တစ်နေ့သင်နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများပျင်းနေလျှင် Austin Panic Room ကိုစမ်းကြည့်သင့်သည်။ သင်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများသည်သင်သော့ခတ်ထားသည့်အခန်းထဲမှမည်သို့လွတ်မြောက်နိုင်မည်ကိုတွက်ချက်ရန်သင့်စိတ်များကိုအတူတကွထားရန်လိုအပ်သည်နှင့်အမျှပျော်စရာဂိမ်းများကိုလှည့်ကွက်များနှင့်လှည့်ပေးသည်။ သင်လုပ်ပါကသင်နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများသည်သင်၏ပုံကိုကျော်ကြားမှုနံရံပေါ်တွင်တင်မည်။
Alamo Drafthouse တွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါ
မည်သူမဆိုနောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန်ပြဇာတ်ရုံတစ်ခုသို့သွားနိုင်သည်။ သို့သော်လူတိုင်းတွင် Alamo Drafthouse ကဲ့သို့သောနေရာတွင်သွားသောရုပ်ရှင်ကိုတွေ့ကြုံရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ Alamo သည်မကြာသေးမီကထုတ်လွှင့်ခဲ့သောရုပ်ရှင်များသာမကဘဲ oldies နှင့် themed films များကိုလည်းပါ ၀ င်သည်။ သင်ရှိနေစဉ်တက်ရောက်လာသူများမှသင်ရိုက်ကူးမည့်အရသာရှိလှသည့်အရသာရှိသောဤရှည်လျားသောမီနူးကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။
Franklin ရဲ့ BBQ များအတွက်တန်းစီရပ်ပါ
သငျသညျသေး Franklin ရဲ့ BBQ များအတွက်ရှည်လျားသောလိုင်းကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်လျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းအနည်းဆုံးအကြောင်းကြားသိကြပြီ။ တက္ကဆက်ပြည်နယ်ကအသားကင်နဲ့ဖရန့်ကလင်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်အတူတကွဆုံစည်း။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျဉ်းတွင်ရပ်ပါ - နောက်ဆုံးရလဒ်သည်အစာအိမ်အပြည့်နှင့်ကျန်ရှိနေသေးသောကျန်ရှိနေသေးသောအိတ်များဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျ Austin လိုက်တယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ယုံကြည်ပါသလား အနုပညာရှင်တစ် ဦး သည်အမှိုက်အမြောက်အများကိုစိတ်ကူးယဉ်အတွေ့အကြုံအဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့သည့် Junk Cathedral သို့သွားပါ။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်မတူပါ။ အမှိုက်၏ပလ္လင်ပေါ်မှာထိုင်နှင့် Austin ရဲ့လိုက်တယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ခံစားရသည်။
မိုဇတ်တ်သည်ရေကန်ပေါ်တွင်အဓိကတည်နေရာရှိရုံမကလေ့လာရန်နေ့ရက်အတွက်စုံလင်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးသည်။ အရသာရှိသောကော်ဖီနှင့်ချိုမြိန်စွာစားသောက်ဆိုင်များကို အသုံးပြု၍ ကန့်လန့်ကာပတ် ၀ န်းကျင်မှအပန်းဖြေရန်အတွက်ကဖင်းဓာတ်ကိုအပြည့်အဝသောက်သုံးနိုင်သည်။ မိုဇတ်တာကိုသွားရန်အချိန်သည်ညအချိန်တွင်သူတို့ပြသသည့်အလင်းတန်းများရှိသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
နက်ရှိုင်းသော Eddy ရဲ့ Distillery ခရီးစဉ်ကိုသွားပါ
Deep Eddy ရဲ့ဗော့ဒ်ကာကိုမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတဲ့သောင်းကျန်းသူတွေနဲ့သင်ပေါင်းသင်းနိုင်ပေမယ့် Austin မှာပြုလုပ်တာကိုသင်သတိထားမိလား။ $ 30 ၀ န်းကျင်အတွက်သင်သည်သူတို့၏နောက်ဆုံးအရသာများကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရှုရန်နှင့်လှပသောအိမ်ယာသို့နေ့လည်ခင်းသုံးဆောင်ရန် Deep Eddy's Distillery သို့သင်သွားလည်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးအချက်အလက်များသည်ပထမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကားမစီးရန်မသွားပါနှင့်။
Torchy's သည် Austin အတွက်ထူးခြားမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် Austinites နှင့် UT ကျောင်းသားများကကျိန်းသေပါသည်။ Torchy's Tacos တွင်သင်နှစ်သက်သော taco အမျိုးအစားရှည်လျားသော menu တစ်ခုရှိပြီးစိတ်ချရသောအရသာအတွက်လျှို့ဝှက် menu တစ်ခုပါရှိသည်။ သငျသညျပေါ်မှာငါတို့စကားလုံးမယူလျှင်, သမ္မတ Barrack အိုဘားမားနှင့်အတူရက်ပ် G-Eazy နှင့်အတူ Torchy ရဲ့အမိန့်မြင်ကြခဲ့ကြသည်။
တာဝါ၏ရှေ့မှောက်၌ Hook-Em ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ
တက္ကဆက်တက္ကသိုလ်တွင်အောင်မြင်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ထင်ရှားသောအမှတ်အသားမှာ UT မျှော်စင်ဖြစ်သည်။ ပေ ၃၀၇ အမြင့်တွင်တည်ရှိပြီးကျောင်းဝင်း၏အလယ်တွင်၎င်းမျှော်စင်သည် UT ကျောင်းသားများ၏အောင်မြင်မှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သတိပေးနေသည်။ တက္ကသိုလ်၌ ၄ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်းအားအမှန်တကယ်ခိုင်မာစေရန်အလို့ငှာရဲတိုက်ရှေ့မှောက်၌ရပ်။ သင်၏ချိတ်ကိုကိုင်ထားခြင်းနှင့်သင်၏ကောလိပ်ကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးသင်ပြုခဲ့သမျှအားလုံးကိုဂုဏ်ယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။